မောင်တော တည်ငြိမ်/ကယ်ဆယ်/ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > မောင်တော တည်ငြိမ်/ကယ်ဆယ်/ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်
မောင်တော တည်ငြိမ်/ကယ်ဆယ်/ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| စနေနေ့၊ ဇွန်လ ၀၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၄၈ မိနစ်	ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့တွင် သောကြာနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အသက်အိုးအိမ်ပျက်စီးကာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လျက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားများအား အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် ‘တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့’ သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း စနေနေ့က ကြေညာလိုက်သည်။ထိုအဖွဲ့တွင် နယ်စပ် လူဝင်မှုစစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ ဦးအောင်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အရာရှိများဖြစ်ကြသည့် မောင်တောခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး မျိုးဝင်း၊ ခရိုင် ဥပဒေအရာရှိ ဦးမြင့်သန်း၊ ခရိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းစိန်၊ မြို့နယ် စည်ပင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်သက်ရှည်နှင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်စိုးတို့ အပြင် ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်မောင်မောင်သိန်းတို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည်။မောင်တောတွင် သောကြာနေ့က သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူနေအိမ်အား မီးရှို့ခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားရာမှ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှ ကြေညာသွားသည်။သို့သော် သောကြာနေ့ ဆူပူအကြိမ်းဖက်မှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိသူတို့အား ယာယီနေရာချထားရေး၊ လုခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေးနှင့် ရေရှည်ကာလတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရာ၌ နေရာချထားမည့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဖွဲ့စည်းလိုက်သောအဖွဲ့က အနီးကပ် ကူညီစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာမူဆလင်များအတွက် တူရကီ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ငွေလှူ	ကမ္ဘာ့မူဆလင်အဖွဲ့ကြီးက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ စာပို့	ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှု ဒုက္ခသည် တသောင်းကျော်ရှိဟု RNDP ပြော	ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ အားဖြည့်ထား	ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့ကြီး ခြောက်ခုတွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထား	ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မောင်တောသို့ သွားရောက်ဆွေးနွေး	ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	Who is Online
We have 231 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved